यो कार्यकाल मुद्धामामिलामा बित्यो, काम गरेर देखाउन फेरी उम्मेद्वारी- डा. पौडेल | khaltinews.com
यो कार्यकाल मुद्धामामिलामा बित्यो, काम गरेर देखाउन फेरी उम्मेद्वारी- डा. पौडेल
२०७४ बैशाख २५
अमेरीका- गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अमेरीकाका अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले वर्तमान कार्यकाल मुद्धा मामिलामा अल्झिनु परेकोले गैर आवासीय नेपाली समाजमा देखिने गरि काम गरेर देखाउनका लागी अर्को कार्यकालका लागी उम्मेद्वारी घोषणा गरेको बताउनुभएको छ ।
मेरो यो दुई वर्ष मुद्धा मामिलामा धेरै समय खर्चिनु पर्यो नेपाल अमेरीका पत्रकार संघ (नेजा)ले आयोजना गरेको एनआरएन अमेरीकाको आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्षका आकांक्षीहरुबीचको बहसमा बोल्दै अध्यक्ष डा. पौडेलले भन्नुभयो -“आगामी कार्यकालमा काम गरेर देखाउन मेरो उम्मेद्वारी हो ।”
नेजाका सदस्य बाल जोशीले सहजीकरण गरेको बहसका क्रममा बिभिन्न प्रश्नहरुको उत्तर दिंदै अध्यक्ष डा. पौडेलले संस्थामा सामान्य बिबाद हुनु स्वभाबिक भएपनि बिबादकै कारण नेपाली समाज बिभाजन गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
बहसमा अध्यक्षका आकांक्षी गौरी जोशी, राम सि पोखरेल र डिल्ली भट्टराई सहभागी थिए भने अध्यक्षकै आकांक्षी रबिना थापा र कृष्ण पोखरेल बहसमा सहभागी भएनन् । बहसका क्रममा सबै अध्यक्षका आकांक्षीहरुले आफुहरु पराजित भएपनि मुद्धामामिलाको झमेलामा नफस्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै बहसमा सहभागी चारै जना अध्यक्षका आकांक्षीहरुले आफ्ना योजना र प्रतिबद्धताहरु स ुनाएका थिए ।